Ndụ nke Forex Trader | FXCC Blog
Feb 23 • N'etiti ahịrị • 5743 Echiche • Comments Off na Ndụ nke a Forex Trader
Ịzụ ahịa azụ ahịa n'ụlọ pụrụ ịbụ ọrụ efu. Ka anyị na-eme ihe n'eziokwu, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị nwere ihe ịga nke ọma, onye òtù ọlụlụ gị na onye ị hụrụ n'anya na onye ị hụrụ n'anya agaghị abụ onye nwere mmasị na ndị ọrụ na-azụ ahịa, na-abụghị uru. Gbalịa ịmalite mkparịta ụka banyere mkparịta ụka banyere: mgbasa, ihe ngosi, nyocha na nyocha, nyochaa usoro ihe metaTrader gị, otu esi arụ ọrụ mmiri STP / ECN, ihe nkedo bụ, algọridim, ahia dị elu, yana ndị ọ bụla na-etinyeghị aka anyị na-azụ ahịa ụwa, na-ezukọkarị na oghere na-ele anya na "nke ahụ dị mma n'anya" okwu.
Imirikiti ndị na-amabughị na-ajụ onwe gị ịchọta ebe ị nọ na ya, n'ihe gbasara ọnọdụ gị; ị na-aga n'ihu na nnukwu egwuregwu nke ndụ karịa ha? Ya mere, ọ gaghị aju gị anya na "ịzụ ahịa ahịa" enweghị mmasị na ọtụtụ ndị ị na-ezute na mberede, ọ gwụla ma ị kọọrọ uru gị, mgbe ahụ ị ga-ahụ àgwà dị iche. Mana iwu mbụ nke ụlọ ọgụ bụ na anyị anaghị ekwurịta banyere ịzụ ahịa, anyị anaghị atụle ọnụ ahịa anyị jiri mee ka anyị zuo okè na 'ndị ọbịbịa zuru okè'.
Anyị na-atụle atụmatụ atụmatụ ịzụ ahịa maka mmekọrịta anyị, ma olee ebe atụmatụ azụmahịa na-agbaso atụmatụ ndụ? Anyị na-arụ ọrụ na-enweghị ike na smart (ọ bụchaghị ike), ịmepụta: atụmatụ, ụzọ ahia bụ ihu na ugbu a anyị maara na ọ dịghị achọ awa nke oge ihuenyo iji nweta uru site na ahịa. Site na mberede, ma ọ bụ imewe anyị kere oge efu nke anyị kwesịrị iji mee ihe.
Ọ gwụla ma ị bụ akwụkwọ nchịkọta akwụkwọ, mgbe ị na-anọdụ n'ihu ihuenyo atọ, jiri nlezianya na-achọ ọrụ ego, ọ bụghị iji oge mee ihe bara uru. Ọ bụrụ na ị bụ onye ahịa a, ị ga-enyo arụmọrụ nke ụzọ ahia ndị dị otú a, nyere na ị na-anwa ịmegharị usoro ọnụọgụ algorithmic nke ọma site na ụlọ ọrụ azụmahịa dị elu.
Iji bụrụ onye na-azụ ahịa na-aga nke ọma, ị ghaghị ịhazi nke ọma na ịdọ aka ná ntị, na ịdọ aka ná ntị nwere ike ịgbasa na-aga n'ihu n'ịhazi ụbọchị ahịa gị n'ime oge nke ị na-eji oge n'efu gị eme ihe n'ụzọ dị irè. Ọdịdị nke àmụmà na-agba ọsọ ọsọ ọsọ ntanetị nke akwadoro na mbadamba na smartphones, jide n'aka na ị ga-echefu ahịa ọzọ. Ọbụna na UK, ebe nnukwu netwọk / wi-fi ọsọ na netwọk na-agba ọsọ ọtụtụ mba ndị mepere emepe, ọ gwụla ma ị nọ n'ime ala enweghi ohere nke inwe njikọ. Ị nwere ike ịtọ ntọala, kwesịrị ịbịaru ọkwa ụfọdụ na nhazi gị, ma ọ bụ ma ọ bụrụ na a ghọtara ihe ngosi ma ọ bụ ihe ụfọdụ. Ị nwere ike idebe iwu ka ịmeghe, nso na ụzọ ego. Na nkenke, enweghi ihe mere ị ga-eji nọrọ na-anọpụ iche, webata ma kwupụta na ụlọ ahịa gị.
Anyị họọrọ ọrụ a dị ka ụzọ ọrụ n'ihi na anyị na-ele anya ebe anyị nwere ike ịbụ mgbe anyị ghọrọ onye maara nke ọma na emesị baa uru. Ya mere, ọ dị mkpa ka anyị nakweere ihe ndị a nke mere ka anyị jiri ahịa na mbụ. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ụbọchị gị na izu gị nke ọma ma mee ka ndị nkụzi ahụ nwee ike ịkwado ya, gbanye na nkwụnye ntị ndị ahụ ma nwee obi ụtọ ahụ na-adịghị. Ma cheta, ọ bụ marathon abụghị ihe mgbagwoju anya.
ForexOnye ahia ahiaNdụ ahia nke Forex
" Ndi isi ochichi na ekwu na onu ogugu onu ogugu ndi United States di nso, dika mpempe edeputara. The DJIA na-ebute ọkwa ọhụrụ maka ụbọchị iri, dị ka dollar slips. »